I-drum granulator ngumatshini wokubumba onokwenza izinto kwiimo ezithile. Isiguquli segubu yenye yeeseti ezigcweleyo zezixhobo kwishishini lokuchumisa elimbaxa. Ifanelekile ingqweqwe ebandayo kunye eshushu kunye nemveliso enkulu-yezinga eliphezulu, eliphakathi nelisezantsi lokuxinana kwezichumisi zekhompawundi. Eyona ndlela iphambili yokusebenza kukuhluma okumanzi kwee-agglomerate. Ngomthamo othile wamanzi okanye umphunga, isichumiso esisisiseko siphendulwa ngokwemichiza kwisilinda emva kokulungiswa kokufuma. Ngaphantsi kwemeko ethile yolwelo, ukujikeleza kwesilinda kunokwenza amasuntswana ezinto avelise amandla okucinezela ukuze adibane kwakhona kwiibhola.
Umatshini weRotary Drum Granulating Machine unokuxhotyiswa nge-boiler ye-steam, itanki yokunyibilikisa ural kunye nomnye umatshini njenge-disk granulator yokuqhayisa iintlobo ezahlukeneyo zesichumiso se-NPK kunye negrisi yezichumiso zezinto eziphilayo. Iigreyina zayo zokugqibela ziyibhola ejikelezileyo, ubukhulu be-1-5mm, ine-90% yomlinganiso wegranulating. Lukhetho olufanelekileyo ekukhetheni izichumisi ezahlukeneyo.
Umgqomo womatshini wamkela ipleyiti yerabha ekhethekileyo okanye i-asidi enganyangekiyo neplate yentsimbi, eqonda ukususwa okuzenzekelayo kunye nokususa ithumba, isusa isixhobo esibi sesintu. Lo matshini uneempawu zamandla ebhola ephezulu, umgangatho omhle wokubonakala, ukumelana nokubola, ukuxhathisa kwe-abrasion, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ubomi obude benkonzo, kunye nokusebenza okufanelekileyo kunye nokugcinwa.
Indawo ejikelezayo yomzimba uphela ixhaswa sisibiyeli kwaye inamandla amakhulu. Ke ngoko, icandelo lesakhelo samavili esixhasayo lifakwe ngeplate yentsimbi yentsimbi kunye nentsimbi yeshaneli, kwaye lidlulile kulawulo lomgangatho olungqongqo kunye neemfuno ezizodwa zenkqubo. Injongo yomatshini. Ukongeza kwinto ebaluleke kakhulu isibiyeli esilungiswe kwishelufa, kuba ucinga ukuba iya kuvelisa ukungqubana okukhulu nebhanti eqengqelekayo, umzi-mveliso wethu ukhetha ngabom izinto zokulwa umhlwa kunye nezinto ezinxibayo ukonyusa kakhulu ubomi benkonzo yomatshini . Ukuphosa iteknoloji ehlanganisiweyo nayo iyasetyenziswa. Ukongeza, kukho amagwegwe wokuphakamisa kwiimbombo ezine zesakhelo sokuhambisa, esilungele ukulayisha nokukothula.
1. Utyalo-mali olusezantsi, izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho, kunye nokusebenza okuthembekileyo;
2. Amandla asezantsi, akukho kukhutshwa kwenkunkuma ezintathu, ukusebenza okuzinzileyo, ukugcinwa okufanelekileyo, ubume bokuhamba okufanelekileyo, kunye neendleko zemveliso ezisezantsi;
3.Ibhola ephezulu yamandla, ukubonakala komgangatho olungileyo, ukumelana nokubola, ukuxhathisa i-abrasion, kunye nokusetyenziswa kwamandla asezantsi;
4. Umzimba wesilinda ugcwele ipleyiti yerabha okanye i-asidi enganyangekiyo ngentsimbi engenasici, eqonda ukususwa okuzenzekelayo nokususa ithumba, ishenxisa isixhobo esikrwada sesintu.
Chwetheza ZG1240 ZG1570 ZG1870 ZG2080
Isantya sokusebenza 17rpm 11.5pm, 11.5pm 11rpm
Ubungakanani beepellet zokugqibela Ububanzi 2-10mm, imilo ngeenxa
amandla 5.5kw 11kw 15kw 18.5kw
Ubukhulu Ø1.2x4mm Ø1.5x7m X1.8x7m X2x8m